Ibali lethu-Camei Ele&Stationery Co., Ltd.
IQuanZhou Camei Stationery Co.,Ltd yasekwa ngo-1996. Ukusuka kwiworkshop encinci yabantu abangama-20, kuye wonke umntu.’s umsebenzi onzima kunye nokuzinikela, siye sakhula saba lishishini elibanzi elibandakanya uphando, ukuveliswa kunye nokuthengiswa kweemveliso zokubhala.
Ngowama-2000, safudukela kumzi-mveliso omtsha ukuze siphuculwe ngakumbi.
Ngoku, inkampani yethu ineemitha ezingaphezu kwe-10000 zeskweri zeemitha ezakhayo ngokwayo kunye nendawo yokugcina impahla.
Bangaphezu kwama-200 abasebenzi
Sinesebe lethu lezentengiso zamazwe ngamazwe.
Abathengisi abaliqela abaqeqeshiweyo, iiodolo ezihambelanayo unyaka wonke kunye neziphumo ezilungileyo zokuthengisa.
Inkampani yethu iqalile ukuvelisa iimveliso ezihamba rhoqo ukusuka ngo-1996, imigca yethu yokuvelisa i-high-frequency inoomatshini abaninzi abaphambili kunye nabaqhubi abanamava.
Siye saseka imigca yemveliso yokunitha kunye noomatshini bokunitha abaphezulu abangaphezu kwama-200 kunye nabasebenzi abanezakhono.
Kukwakho nomgca wemveliso ogxile kwiimveliso zesikhumba esekwe kwiglu kunye nabasebenzi abanezakhono abanobuchule obuchwephesha beglu.
Sazisa ulawulo lwemveliso oluphezulu lweToyota ngo-2013 ukwenza imveliso ibelula, iphucule ukusebenza kakuhle, nokuqinisekisa umgangatho ongcono wemveliso.
Inkampani yethu ivelisa uluhlu olubanzi lweengxowa zokubhala, izitayile ezizodwa ezinomgangatho olungileyo.
Iimveliso zethu zithunyelwa kumazwe amaninzi nakwimimandla efana neYurophu, iUSA kunye neJapan.
Inkampani yethu ithe gqolo ukubambelela kumgangatho kunye nexesha lokuhambisa ngaphezulu kweminyaka engama-20, kwaye iphumelele iindumiso ezivela kubathengi kuyo yonke indawo.
Uhambo lwenkampani: Silungiselela uhambo lweqela rhoqo ngonyaka kubasebenzi; Umzekelo: 2016 ChangTai 2 uhambo lweentsuku; 2017 FuZhou PingTang 2 uhambo lweentsuku; I-2018 i-NingDe TaiLao Intaba ye-2 uhambo lweentsuku;
Imisebenzi; Umsebenzi wekota wabasebenzi njengokunyuka intaba yaseNtwasahlobo, umnyhadala wezemidlalo wasehlotyeni, ukhuphiswano lokuqengqeleka kwedayisi ekwindla (isithethe kumazantsi ephondo laseFujian), kunye nesidlo sokuphela konyaka ngaphambi koNyaka oMtsha waseTshayina.
Ngo-2016, inkampani yethu imeme abathengi abaninzi abasebenzisanayo ukuba baye kumsitho wethu wokugqiba iminyaka engama-20 kwaye ibingumsitho owonwabisayo kuye wonke umntu.
Uqeqesho: Inkampani yethu iseke iCamei Academy. Sijonge ukuqesha rhoqo iingcali ukuba zifundise kwaye ziququzelele uqeqesho lwangaphandle kubo bonke abasebenzi.